လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ကျူးလွန်ခံရရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ကျူးလွန်ခံရရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ?
ဒီတစ်ခါမှာတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ကျူးလွန်ခံရရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ မမတို့၊ ညီမတို့ကို အကျိုးရှိစေမယ့် အချက်လေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ခံရတယ် ဆိုတာ နာကျင်မှု၊ အဆင်မပြေမှုစတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့တွက် ဘယ်သူကမှတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုလိုကိစ္စမျိုးကို အလိုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သို့သော်လည်း အကယ်၍များ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ရှိသော် ဘာတွေများ လုပ်နိုင်မလဲ။၊ မိမိ ကျူးလွန်မခံရပေမယ့် ကိုယ့်မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရင် ကူညီပေးနိုင်ဖို့ အောက်ပါအချက်အလက်လေးတွေကို ဖတ်ရှုထားသင့်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံမှုကို သေသေချာချာ ရှိနေပါစေ။
ဆိုးတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားရင် စိတ်ဆင်းရဲစရာများစွာ ကြုံလာနိုင်တာမို့ မဖြစ်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံမှုကို ဂရုစိုက်ပါ။ ငါမကျူးလွန်ခံရလောက်ပါဘူးလို့ ပုံသေမတွေးသင့်ပါဘူး။ ကြုံခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း နောက်တစ်ခါ ထပ်မဖြစ်အောင် လုပ်ထားဖို့က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်က သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာမို့ မုဆိုးက အခါသင့်ရင် ထပ်မံပြီး ကျူးလွန်ဖို့ ကြံစည်နေမှာပါ။ ပထမ ကနေ ဒုတိယ ထပ်မဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို သေသေချာချာ ဂရုပြုဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
(၂) ကိုယ့်ကို ကူညီနိုင်တာတွေကို အသင့်ရှိနေပါစေ။
ဆိုပါတော့ .. ကျူးလွန်ခံရပြီးသွားမှ ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိရင် မိအေး ၂ ခါနာတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျူးလွန်မခံရစဉ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျူးလွန်ခံရပြီးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ကူညီနိုင်မယ့်သူကို ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းဖို့ အသင့်ရှိနေတာမျိုး၊ ရဲစခန်းဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဖုန်းထဲမှာ အသင့်ရှိနေတာမျိုးတွေ လုပ်ထားရပါမယ်။
(၃) ဆေးကုသဖို့ လိုအပ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေရှိနေပါစေ။
ထပ်ပြောပါမယ် .. “ငါက ဘယ်တော့မှ ကျူးလွန်မခံရလောက်ပါဘူး”လို့ မတွေးပါနဲ့။ ဖြစ်ပြီးရင် ကိုယ့်ဘက်က
ဘာတွေလုပ်မလဲ၊ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ တွေးထားပါ။ အသင့်ရှိပါစေ။ တွေးထားရမယ့်ကိစ္စမှာ ကျန်းမာရေးက အဓိကနေရာက တွေးစေချင်ပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ပါလာတဲ့အခါမျိုးဆို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတဲ့အမေးအတွက် အဖြေရှိနေဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ကိုယ်ဝန်ကိစ္စတင် မကပါဘူး။ အခြား ထိခိုက်သွားမယ့် ကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဖြေရှင်းဖို့ တွေးထားသင့်ပါတယ်။
(၄) ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေရှိနေပါစေ။
ကိုယ်ကကျူးလွန်ခံရပေမယ့်လည်း တကယ့်တကယ် အမှုအခင်းဖြစ်တဲ့အခါ မုဆိုးက ဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာအောင် ငွေအင်အား၊ လူအင်အားနဲ့ ကြိုးစားပြီး အလွတ်ရုန်းပြေးသွားတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ့်ဘက် ကြိုတင်လေ့လာထားဖို့၊ ပြင်ဆင်ထားဖို့ကလည်း လိုအပ်လှတဲ့ကိစ္စရပ်ပါ။ ကျူးလွန်ခံရပြီးသူအဖို့မှာလည်း ကိုယ်က အမှုဖွင့်တဲ့အခါ သက်သေတည်ဆောက်တာမျိုး၊ တရားခွင်မှာ ပြောဆိုရတာမျိုးတွေအတွက် ကြိုတင်လေ့လာထားရပါမယ်။ ဒီခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု ကျူးလွန်ခံရရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အဖြေအတွက် လေဒီတို့ အထောက်အကူရမယ်လို့ သိလိုရာမေးက ယုံကြည်ပါတယ်။